Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo sheegay arrin ka go'an inay sameeyaan - Caasimada Online
Home Warar Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo sheegay arrin ka go’an inay sameeyaan
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo sheegay arrin ka go’an inay sameeyaan
Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry André ayaa sheegay inay dawladda Maraykanka ka go’an tahay inay taageeraan dib usoo noolaynta Soomaaliya deggan, nabad ah, islamarkaana dimoqraadi ah.
Mareykanka waxay horey u qaadeen tallaabooyin ay ku qasbayaan in doorashada Soomaaliya loo soo geba-gebeeyey si deg deg ah.
Washington waxay ballaarisay liiska shaqsiyaadka Soomaalida ee lagu soo rogay xayiraadaha dal-ku-galka (Visa), sababo la xiriria dib u dhaca mar kale ku yimid in lasoo geba-gebeeyo doorashada golaha shacabka.
Madaxweyne Joe Biden ayaa bishii April 2021 magacaabay Larry André Jr, oo ah ruug caddaa muddo badan kasoo shaqeynayay diblomaasiyadda. André ayaa hore u ahaa safiirka Maraykanka ee Jabuuti intii u dhaxeysay Noofembar 2017 illaa Jannaayo 2021, isaga oo 2014 kii ilaa 2017 soo noqday safiirkii Maraykanka ee dalka Mauritania.